Category Archives: कविता>>
यहा केही गद्य कविता,पद्य कविता,तथा काव्यहरू राखिएको छ।
Posted on जनवरी 3, 2016 by Padam Prasad Paudel	• टिप्पणी छोड्नुहोस्
ड्याङ ड्याङ ड्याङ ड्याङ, को आयो यो मध्यरातमा? ढोका खोले बिम्झिएर, तर्सिहाले देख्दा उ साथमा, किन आएको यति राती? को हौ तिमी? म नया बर्ष चिनिनौ २०१६ को सिमी साच्चै के तिमी नै हौ त नया बर्ष? नत उज्यालो छ कतै, नत खुसियालो छ कतै। नत प्रीतिको गीत बज्दै छ कतै, नत कसैले मीत रच्दै … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →